Ụlọ ọrụ ọkachamara nke China maka SAE J1772 Ọkwa 2 switchable Reserve EV chaja rụpụta na ụlọ nrụpụta | Tech Joint
Ụlọ ọrụ ọkachamara maka China SAE J1772 Ọkwa 2 switchable Reserve EV chaja
Ụlọ ọrụ ọkachamara maka China EV chaja, Ngwa eletriki, aha ụlọ ọrụ, na-ekwu maka ịdị mma mgbe niile dịka ntọala ụlọ ọrụ, na-achọ mmepe site na ntụkwasị obi dị elu, na-agbaso ụkpụrụ njikwa mma ISO nke ọma, na-eke ụlọ ọrụ kacha elu site na mmụọ nke ọganihu- na -aka akara ịkwụwa aka ọtọ na nchekwube.
Anyị na -ewetakwa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na -eme ka ngwaahịa na ọrụ nkwado ụgbọ elu. Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke anyị na ebe ọrụ na -atọ ụtọ. Anyị nwere ike nye gị ụdị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ejikọtara na ụdị ihe anyị maka ụlọ ọrụ ọkachamara maka China SAE J1772 Level 2 Switchable Reserve EV Charger, "Gbanwee maka nke ka mma!" bụ isiokwu anyị, nke pụtara "ụwa ka mma dị n'ihu anyị, yabụ ka anyị nwee obi ụtọ na ya!" Mgbanwe ka mma!
Ejiri ọdụ ụgbọ ala eletrik JNT-EVC10 nwere ndị na-agụ kaadị RFID maka njirimara onye ọrụ. Site na iji ụdị ergonomic dị iche iche, enwere ike itinye ya na mgbidi ma ọ bụ pedestal ka ọ na -enye ụgwọ dị iche iche ugbu a. JNT-EVC10 na-enye gị ohere ịgbakwunye chaja ụgbọ ala eletrik dị ka uru agbakwunyere na ile ọbịa, ọfịs, obodo na ọtụtụ ihe azụmaahịa ndị ọzọ.
Emebere netwọkụ arụnyere (LAN, 4G, ma ọ bụ Wi-Fi) iji jikọọ na ngwanrọ njikwa OCPP nke atọ.
Nhazi ntọala mgbidi ma ọ bụ kwụ ọtọ nke na-arụ ọrụ n'ime ike sekit gị iji belata ụgwọ nrụnye.
Nyocha RFID echekwara na -enye ohere ịnweta ndị ọkwọ ụgbọala EV.
Plọg SAE J1772 ™ nke dakọtara na ọtụtụ eletriki na ngwa eletriki ngwakọ.
4.3 ″ LCD iji gosipụta data ụgbọ ala niile na ọdụ chaja n'oge chaja. Nwere ike ịhụ ọnọdụ ụgwọ, gụnyere ugbu a, voltaji na ọnọdụ okpomọkụ. The kposara dabara n'ime igbe otú echegbula onwe gị banyere na ihuenyo ada. Eriri 18ft ma ọ bụ 25ft na -ahapụ ohere zuru oke n'etiti ụgbọ ala na ọdụ chaja.
Ụlọ ọrụ ahụ nwere onye na -enye ike nke na -edozi ọdụ ụgbọ ala mgbe ngwaọrụ eletriki dị iche iche na -arụ ọrụ.
Ya mere, ọdụ ụgbọ ahụ nwere ike rụọ ọrụ n'okpuru ọkụ na -agbanwe agbanwe mgbe niile, na -ezere nkwụsịtụ na ihe egwu ndị ọzọ nchekwa nke enweghị ike dị ugbu a kpatara.
Ngwaahịa anyị niile bụ ETL/OA, ogo a pụrụ ịtụkwasị obi. Chaja EV anyị dakọtara na ọtụtụ ụgbọ ala eletriki nke na -agbaso ọkọlọtọ SAEJ1772.
Nke gara aga: 7kw EV chaja chaja ụlọ na TUV Ce RoHS
Osote: 11.5kw AC EV Charger Commercial Version Electric Car Charging Solar EV Station
Ebe ikpo oku
Ọdụ Ụgbọ ala ụgbọ ala China
Onye na-emepụta China na-akwụ ụgwọ ụgbọ ala EV
Igwe ụgbọ ala eletrik
EV chaja ikpo
Chaja na -adọ atọ
Ịnye OEM Commercial Electric Vehicle Nchaji ...
Ọkwa 2, ụgbọ ala eletrik 240 volt (EV) chargin ...
SAE J1772 China Manufacturer Wall-n'ịnyịnya EV Ca ...
Ọkwa ọkwa nke abụọ EV chaja nwere ụdị 1 tinyekwa 16a ...
EV Nchaji Station Wall-nọkwasịrị n'ịnyịnya Electric Charg ...